Tag: kushambadzira gore | Martech Zone
Tag: kushambadzira gore
Kwegore rapfuura, tanga tichishanda nekambani yenyika pane yakaoma Salesforce uye Kushambadzira Cloud kutama uye kuita. Pakutanga pakuwanikwa kwedu, takaratidza zvimwe zvakakosha maererano nezvavanoda - zvaive zvakanyanya kushanda-kwakavakirwa. Kana iyo kambani ikagadzira mushandirapamwe, ivo vaizogadzira rondedzero yevanogamuchira kunze kwavo kwemaemail kushambadza chikuva, kurodha runyorwa kunge runyorwa nyowani, kugadzira email, uye kutumira kune iwo runyorwa.
Chitatu, Ndira 16, 2019 Mugovera, January 19, 2019 Denis Zhinko
Vatengesi vanowanzoona kusarudzika kweemail sechiratidzo chekubudirira kwepamusoro kwemishandirapamwe yeemail uye kuishandisa zvakanyanya. Asi isu tinotenda kuti nzira yehungwaru yekushandurwa neemail inopa mhedzisiro kubva kune mutengo-kugona kuona. Isu tinotarisira kuti chinyorwa chedu chibude pachena kubva kune yakanaka tsaru maemail kutumira mameseji kune akaomesesa email maitiro kuitira kuratidza maitiro akasiyana mashandiro anoshanda zvichienderana nerudzi rweemail uye chinangwa. Tiri kuzopa dzidziso yedu